ICraffarm: Fumana iiNtatheli ukuba zibhale malunga nokuQalisa kwakho | Martech Zone
Ngamanye amaxesha, sinengeniso yangaphambi kwexesha, ukuqala kokuqala kotyalo-mali abasicela uncedo lokuthengisa kwaye akukho nto sinokuyenza kuba bengenalo uhlahlo-lwabiwo mali. Sihlala sibabonelela ngengcebiso ebandakanya ukukhuthaza ukuthengisa ngegama-ngomlomo (ukuhanjiswa) okanye ukuthatha incinci imali abanayo kwaye bafumane ubudlelwane obukhulu kuluntu. Kuba umxholo kunye nentengiso engenayo ifuna uphando, ukucwangcisa, ukuvavanya kunye nokukhula- kuthatha ixesha elininzi kwaye kufuna izixhobo ezininzi zokuqalisa.
Siye sabhala ngaphambili indlela yokufaka inowuthi kwaye Ungayifaki njani inowuthi Ibhlog okanye intatheli. Ukubhala iposti efanelekileyo, echazayo kwintatheli yeyona ndlela ilungileyo yokuzama ukufumana ukuba ukuqala kwakho kufumanekile. Abanye abantu bakholelwa ukuba le yi-SPAM nje kodwa ayisiyiyo. Njengeblogi yetekhnoloji yentengiso, ndilindele ngokupheleleyo, ukuthanda kunye nokusebenzisa iipaki phantse yonke imihla ukufumana iimveliso ezintsha kunye neenkonzo oza kubhala ngazo kule bhlog. Isitshixo kukuba i-pitch yenziwa njani kwaye ingaba ifanelekile kubaphulaphuli bam.
Icandelo leendaba yindawo entsha yokuqalisa eqokelele i-imeyile kunye neeakhawunti ze-twitter zeentatheli kuyo yonke i-Intanethi ebhala malunga nokuqala. Eyona nto ilunge kakhulu, ayisiyiyo imali eninzi ebhalisiweyo. Yimbinana nje yokufikelela kuluhlu lonke lweentatheli.
Ingcebiso yam malunga nokuqalisa - yenza umyalezo wobuqu kulo lonke ushicilelo onqwenela ukufikelela kulo. Yigcine ibuthuntu kwaye ukuya kwinqanaba, sukubaxa ukuba uyinto enkulu elandelayo, thumela iifoto zesikrini sekhonkco kwividiyo ukuze babukele… kwaye ulinde. Nceda ungaqhubeki uzibhala ziphindaphindwe… oko kuyacaphukisa. Ukuba bafuna ukubhala malunga nawe, baya kuba okokuqala ukudibana nabo.
tags: iblogger bioInqaku leBloggerfumana iibhlogi kwi-twitterfumana iintatheli kwi-twitterintatheli bioInqaku lentatheliukumaUmatshini wokushicilelaqalisaiintatheli zokuqalisaintengiso yokuqalisaushicilelo lokuqalisa
Ungasikhetha njani isisombululo sokuThengisa
Umceli mngeni weNtengiso yeeSilos kunye nendlela yokuziqhekeza